Ryuko Park | Ryuko Chirangaridzo Horo
Nezve Ryuko Park
Ryuko Park inochengetedza iyo yekare imba uye imba yekutenga yakagadzirwa naRyuko pachake.
Imba yekare yakavakwa muna 1948-54 mushure mehondo, uye imba yekutandarira, iyo yakapona pakabhombwa, yakavakwa muna 10, yegumi yegore rekugadzwa kwaSeiryusha.
Uye zvakare, Ryuko akagadzira iyo "Bhomba Sanka no Ike" muRyuko Park sedziva rechikamu chekugara chakaparadzwa nekupamba kwemhepo pakupera kwehondo.
Ryuko Park ichatungamirwa nevanoyeuchidza vashandi pazuva rekuvhura.Ruzivo nguva ndeye 10:00, 11:00, 14:00 katatu pazuva.
(Ndokumbira utarise kuti gedhi rakavharwa uye haugone kuriona zvakasununguka kunze kwekunge panguva yekufambisa.)
* Pari zvino, nhungamiro ine rondedzero ichamiswa, chirevo chichagoverwa, uye 30-maminetsi emahara kuratidzwa kuchapihwa.
Tinotenda kunzwisisa nekushandira pamwe.
Kuzvipira kugadzirwa uye hupenyu
Unogona kuona kuzvipira kwaRyuko dhizaini, senge 60 tatami mat atelier iyo inonyanya kukosha nezvechiedza chemasikati, uye nzira yematombo inosanganiswa pachiyero sedhiragoni inotamba yakakwira mudenga.
Matombo ematombo anobatanidza imba yekare uye atelier
Nzvimbo yemwaka mina
Mwaka wezvirimwa senge plums, cherry maruva, uye matsutso mashizha color Ryuko Park.Unogona kubata maonero aRyuko ounyanzvi, ayo akanzi "kudyara kwekuveza mifananidzo" mubindu.
"Bhomba Sanka" dziva mumwaka wemaruva
Imba yekare uye pamberi peyadhi mumwaka wematsutso mashizha